Maxaa looga hadlay kulamadii labaad iyo saddexaad ee kalfadhigii saddexaad ee Aqalka sare – Kalfadhi
Baarlamaanka Hindise-Sharciyeedyo Warar
Maxaa looga hadlay kulamadii labaad iyo saddexaad ee kalfadhigii saddexaad ee Aqalka sare
July 24, 2018 Kalfadhi
Kulankii labaad ee Kalfadhigii Saddexaad Ee Aqalka sare , waxaa looga hadlay xeerka dhawridda gobonnimada iyo midnimada geyiga Soomaaliyeed kaas oo kasoo gudbay Golaha Shacabka 12-kii Maarso ee isla sanadkan 2018.
Mudanayaasha ayaa dood dheer ka yeeshay waxaa la siiyay xeerka kasoo gudbay golaha. Waxaana la isku raacay In maalinkaas maalinkii xigay laga dodo.
Kulankii saddexaad ee kalfadhigii saddexaad.
Cabdi xaashi Cabdullaahi guddoomiyaha Aqalka Sare oo kulankaas shir guddoominayay oo ayaa ugu horreynba mudanyaasha kula dardaarmay in ay muujiyaan feejignaan isla markaana ay si dan guud ah uga hadlaan arrinka xasaasiga ah ee horyaalla.
Sanatar Saynab Nuuro Faarax Jaamac oo ka mid ahayd mudanayaashii hadlay ayaa si adag uga hadasahy xeerka waxa ayna sheegtay in deg deg uu jiro loona baahanyahay in aad looga fikiro go’aannada la garayo.
Sanatarad Nuura waxa ay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ka gaabsaneyso fara gelinta dowladda Itoobiya ay ku heyso gudaha dalka, taa baddelkeedana ay ka hadleyso Imaaraad iyo dowlado kale.
Waxay sheegtay in si isku mid ah DP_World looga saaro dalka “dekedaha ay gacanta ku heysana lagu soo celiyo gacanta Soomaalida.”
Sanatar Nuuro Faarax
Iftiin Xasan Baasto Waxa uu kulankaas ka sheegay “ Dhawridda gobonnimada gayiga Soomaaliyeed maahan mid gorgortan gali kara”. Golaha Shacabka ayuuna ku ammaanay go’aanka ay ka qaateen.
Sanatar Mustaf Qodax oo ka mid ah mudanyaasha kulankaas ka hadlay ayaa isna sheegay in lama huraan ay aad loo lafa guro sharcigaas isla markaana ay Soomaaliya ku tartamayaan quwado shisheeye loona baahanyahay in aad looga fikiro go’aannada la qaadanayo.
Sanatar Axmed Xaashi oo isna hadlay waxa uu sheegay in aysan jirin sabab loo sugaa oo ay tahay in mudanayaashu qaataan go’aan la mid ah kii Golaha Shacabka. Madaxda dowladda ayuuna ku dhaliilay in Soomaaliya ay heerkaas ah in lagu dodo dekadaheedi ay gaarsiyeen.
Sanatar Axmad Xaashi oo ka hadlaya kulanka
Sanatar Xuseen Shiik Maxamuud oo la hadlay isna kulankaas ka hadlay ayaa sheegay in haddii la aqbalo in dekadaha dalka ay waddamo kale iska qaataan iyadoon lasoo marin dowladda fedraalka ‘barrina circa iyo dhulka lala wareegi doono”
Sanatar Cabdi Qaybdiid ayaa isna sheegay ayaa isna sheegay in ay xeerkan uu mudanyahay in loo dagdago isla markaana si deg deg ah loo asxiniyo.
Ugu dambeyn kulankii saddaxaad waxa uu soo gabagaboobay iyadoo wali ay harsanaayeen ilaa 10 sanatar, waxaana lagu ballamay in la isku soo laabto maalinkii xigay.
Sidaas ayuuna kulankaas kusoo xirmay saacaddu markii ay ahayd 3:30 PM [galabnimo].
Xildhibaan Sadiiq Warfaa: Waa In Miisaaniyadda Baarlaamaanku Ka Madax Bannaanaato Xukuumadda
Taariikhda Sanatar Xuseen Shiikh Maxamuud